Posted by စော(အဝါရောငျမွေ) at 6:12 AM3comments:
Posted by စော(အဝါရောငျမွေ) at 8:41 AM No comments:
Posted by စော(အဝါရောငျမွေ) at 8:40 AM No comments:
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က အယ်လန်ရဲ့အလှူပွဲး ရန်ပုံငွေပြပွဲးလေး တစ်ခုကို T.V ထိုင်ကြည့်ရင်းက မြင်တွေ့ ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရုတ်သံကနေ အစီအစဉ်ဆွဲးထားတဲ့ အခန်းလေးတစ်ခု၊ ခုချိန်ထိ မရှိနေသေးပါဘူး။ မြန်မာပြည်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေဟာ ပုဂ်ဂလိက အပိုင်းကို မရောက်သေး တာလည်း အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
သူက ရုတ်သံကနေ ပြိုင်ပွဲးလေး တစ်ခု ဖိတ်ခေါ်ကျင်းပတာပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ ဆိုရင် ကျမ္မာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဟောပြောပွဲး ကျင်းပတာ၊ တက်ရောက်နားထောင်ဘို့ဖိတ်ခေါ်တာလိုမျိုးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဝင်ကျေးတော့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီပိုက်ဆံတွေကလည်း ကျင်းပတဲ့သူက Volunteer (အခမဲ့ လုတ်အားပေး ထားတာပါ။) ပိုက်ဆံ အကုန်လုံး ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ နေရာတစ်ခုကို လှူလိုက်တာပါ။ သူဘယ်လောက်လှူမယ်၊ ဘယ်သူက ဒီအစီအစဉ်ကိုယ် စိတ်ဝင်စားပြီး ဘယ်လောက် လှူတယ် ဆိုတာ တရားဝင် တိုက်ရိုက်ပြသတဲ့ ပွဲးမှာပဲ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင် ကျေညာပေးတာပါပဲ။
ဘဏ်ကနေ ATM ကဒ်နှင့် Account number သိရုံနှင့် ငွေလွဲ လို့ရနေတော့ ကမ္ဘာ့ ဘယ်အရပ်ကို မဆို ပို့ လို့ ရတဲ့ ခုလိုခောတ်မှာ သူ့ နိုင်ငံထဲက နေရာလေးတစ်ခုကို ပို့ လိုက်ဘို့ဆိုတာ မိနစ်ပိုင်းလောက်နဲ့ ကိစ္စပြီးတဲ့ အလုတ်ပါ။ လူတွေရဲ့တီထွင်ကြံဆမှူတွေ ကနေ ကမ္ဘာကြီးဟာ အင်တာနက်၊ လျှက်စစ် စွမ်းအင် တွေကို ကျယ်ပြန့် စွာ သုံးလို့ နေတာ တွေ့ ရတော့ ကျမနိုင်ငံကို အဲလို့ဖြစ်စေလို့ တဲ့ စိတ်စေတနာတွေ ဖြစ်မိတယ်။ တကယ်ပါ၊
ဘယ်နိုင်ငံမှာ မဆို ကိုယ်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်လို့ တဲ့ စိတ်ထားရှိဘို့ က အရေးကြီးတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ ကြိုးစားလိုတဲ့စိတ်၊ ကိုယ်ခြေထောက်ပေါ် ရပ်လိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေး ပေးလေ့ရှိတဲ့ အကျင့်ကို ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ အများဆုံး တွေ့ ရပါတယ်။ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ အသက် နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မှာတောင် အလုတ်မလုတ်သေးပဲ၊ အိမ်တွေမှာ ကလေးဆိုးတွေလို နေ နေကြတာကို တော့ ကျမ စိတ်ထဲ သိပ်မတွေ့ လှဘူး။ ဒါဟာ ကိုယ့်သား၊ သမီးကို ချစ်ရာ ရောက်ရဲ့ လားဆိုတာ စဉ်စားသင့်လှပါတယ်။
အင်း ပြောလိုတဲ့ ကိစ္စလေးဘက်ကို လမ်းကြောင်းပြောင်း လိုက်ပါရစေနော်။ အယ်လန်ရဲ့အလှူရံပုံငွေပွဲး လေးက ဒီတခါတော့ မူကြိုကျောင်းလေး တစ်ခုရှင့်။ ဒါပေမယ့် နံမည်ကြီးကျောင်း ဟုတ်၊ မဟုတ်တော့ ကျမ သေချာမသိပေမယ့်၊ ဒီကျောင်းလေးရဲ လုတ်ဆောင်မူတွေ၊ စေတနာ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ကတော့ ကောင်းပုံရပါတယ်။ သူ့ ကျောင်းလေကို ရည်ညွှန်းတဲ့၊ ထောက်ခံမူ့ ပေး ပြောဆိုတဲ့သူတော့ တော်တော် များတယ်လို့အစီအစဉ် ကျင်းပပွဲး ကူညီလုတ်ဆောင်တဲ့ အယ်လန်က အစီအစဉ်ကနေ ဖုန်းဆက် ပြောတာကို နားထောင်လိုက်ရပါတယ်။
ကျောင်းလေးရဲ့ပုံစံကိုပါ အင်တာနက်ကနေ တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ပြနေတာမို့အစီအစဉ်ကနေ မြင်တွေ့ နေရတာပေါ့။ သာမာန် မူကြိုကျောင်း လို့ ဆိုတာထက်၊ ကလေးတွေ အတွက် စာအုပ်စဉ်တွေ ပါနေတာကတော့ ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ မမြင်ဘူးသေးတဲ့ မြင်ကွင်းဆိုတာကို ကျမစိတ်ထဲက မှတ်မှတ် ထင်ထင်ကို သိနေတာပါပဲ။ ကလေးတွေကို သာမာန် စာသင်ပေး၊ အိမ်ခိုင်း၊ စားခိုင်းတာမျိုးတင်တော့ မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ ကျောင်းကလေးကသိပ်မကျယ်ပေမယ့် စင်္ကာပူမှာလို ကစားစရာ ပစ္စည်းတွေ သိပ် အများကြီး မတွေ့ ရဘူး။ ပြီး စင်္ကာပူက ကလေးတွေကို အရုတ်တွေ ဆွဲးခိုင်းတယ်၊ သင်ပေးတယ်။ သီချင်းဆိုခိုင်းမယ်။ ဆော့ခိုင်းမယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် ဘုရားရှစ်ခိုး သင်၊ စားခိုင်း၊ အိမ်ခိုင်းမယ်။ တချို့ကျောင်းတွေမှာဆို ပုံဆွဲးခိုင်း ၊ ဆော့ခိုင်းမယ်။ ဒါလောက်ပဲ တွေ့ ဘူးတယ် ထင်တာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ကျမခေါင်းထဲမှာ စာအုပ်စဉ်တွေ အများကြီးနဲ့စာကြည့်ခန်းလေးထဲက မူကြိုလေးဆီပဲ ရောက်နေတော့တာပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တိုးတက်ဘို့ ဆိုတာ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝတဲ့၊ စိတ်နေမြင့်တဲ့ ၊ တွေးခေါ် မျှော်မြင်နိုင်စွမ်းတဲ့ လူရွယ်၊ လူကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှူ့ တင် မကပါဘူး ဒီလို့နုနယ်တဲ့ ကလေးတွေမှာပါ ကိုယ်ကျင့် သီလကောင်းမူ့ ၊ တွေခေါ်မျှော်မြင်တတ်လာအောင် သူတို့လေးတွေရဲ့စိတ်ကူးလေးတွေကို စာအုပ်ကောင်းလေးတွေကနေ သင်ပြပေးဘို့ ကလည်း လိုအပ်နေတယ်လို့ကျမစိတ်က လက်ခံနေလို့ ပါပဲ။
ကျမစိတ်ထဲမှာ ဒီလို အလုတ်မျိုး လုတ်ပေးလိုလှပေမယ့် ခုချိန်မှာ အလှမ်းဝေးနေသေးတာမို့ဒီလို လုတ်ပေးဘို့စိတ်ကူးလည်းရှိ၊ နေရာနှင့် ရင်နှီးနိုင်တဲ့သူတွေ ရှိလာ၊ ပေါ်ပေါက်လာစေဘို့ ကိုပဲ ပိုပြီး မျှော်လင့်ရင်း ကိုယ့်စိတ်ကူးနှင့် ကိုယ်အနာဂတ်ကို ကလေးလေးတွေကပဲ စာပေ၊ ဗဟုသုတတွေ ကနေ လမ်းပျောက်မနေပဲ၊ တည့်မတ်မှန်ကန်စွာ ရွယ်ချယ်နိုင်တဲ့ ယနေ့ လူငယ်၊ နောင်ဝယ်လူကြီး ဆိုတဲ့ စကားလေးလိုပဲ လူချွန်၊လူကောင်း အလောင်း၊ အလျှာလေးတွေကို မွှေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ လုတ်ငန်းရှင် လေးတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ဒီနေရာကနေ ဆုမွန်ကောင်းတောင်း လိုက်ပါတယ်ရှင်။
Posted by စော(အဝါရောငျမွေ) at 3:15 AM No comments:
မွန်းကျပ်မူ့ ကို ဖောက်ထွက်လို့ 
သေခြင်တဲ့ ကျားတောပြောင်း ဆိုတဲ့ စကာပုံလိုပဲ၊ အလုတ်ပြောင်းလိုက်တာ အသွားမတော် တလှမ်း၊
အစားမတော် တလုပ် ဖြစ်သွားတယ်။ ကျောင်းပြီးခါစက ကျမမြို့ လေးကနေ ခွဲခွာထွက်ခဲ့ရတုံးကလည်း မိဘအိမ်မှာ
မိဘရဲ့အမိုး၊ အကာ အောက်ကနေ လောကကြီးကို မမြင်ဘူးတဲ့ အံသြစရာကောင်း၊ မသိဘူးသေးတဲ့ လူတွေရဲ့ 
လူလည်ကျတတ်၊ ငှဲ့ ညာမူ မရှိတဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေကို ထူးဆန်းစွာ ကြည့်ပြီ ရင်ဆိုင်ခံစားခဲ့ဘူးတယ်။ အလုတ်စလုတ်မှ လူလောက အကြောင်း သိရလေအောင် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ မိဘနှင့် ဆွေမျိုးတွေရဲ့ကျေးဇူးတွေကို ခုတော့မှ နာလည်မိတယ်။
အဲဒီတုံးကတော့ တဖြည်းဖြည်းခြင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရင့်ကျက်လာတယ်လို ထင်ခဲ့၊ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ ဘူးတယ်။ တခါ ကိုယ့်မခံရပ်နိုင်တဲ့ ခါးသည်းမူတွေကို အချိုးအကွေ့ တွေ တွေ့ ရတိုင်း ရင်ထဲမှာ နာကျင်စွာ ခံစားရတိုင်း ရင့်ကျက်မူ့ ဆိုတာ ဒါမျိုးတွေကို ရင်ဆိုင်ရင် ` သြ ၊ . . . ဒါတော့ ငါ မခံစားနိုင်သေးပါလား ​` စဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ်။ အဟပ် သူရဲခြောက်တယ်လို့စိတ်ထဲ ထင်လိုက်တိုင် ခြေဖျား၊ လက်ဖျားတွေ အေးသွားပြီး စိတ်ထဲမှာ တုန်လှုတ်သွားတိုင်း တကယ်တော့ ငါဟာ ကြောက်တတ်နေတုံး ပဲဆိုတာ ကိုယ်ဘာသာ လက်ခံလိုက်ရတာလိုမျိုးပါပဲ။
နိုင်ငံခြားမှာ အလုတ် , လုတ်ရတာ နတ်ပြည်ရောက်သွားတာလည်း မဟုပ်ဘူး၊ ငရဲပြည် ရောက်တာလား ? နေ့ ခံ၊ ညစံတဲ့ ပြိတာဘဝ ကို လူအရှင်လတ်လတ်ပဲ ရောက်သွားတာလားလို့ လည်း စဉ်စားနိုင်တယ်။ ပြောင်းခဲ့မိတဲ့ အလုတ်ကို ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မသေမခြင်းတော့ အလုတ် လုတ်နေရဦးမယ်လေ … စား၊ ဝတ်၊ နေရေးက ရှိသေးတာကိုး။ ဟိုတုံးက လူတွေ နိုင်ငံခြားမှာ ငွေရှာရင် တကယ်သူဌေး ဖြစ်ကောင်း၊ ဖြစ်ခြင် ဖြစ်မယ်။ ခုကတော့ ရန်ကုန်မှာ အိမ်ပိုင်ဘို့ကို မဆိုထားနဲ့သိတတ်သူဆို မိဘကို ကျေးဇူးဆပ်တာနဲ့ တောင် အိုစာကို ခြစ်ခြုပ်စုရမယ့်သူတွေ များစွာ ရှိပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၄၊ ၅ ၊ ၆ လ လောက်က ထိုင်းကနေ စင်္ကာပူကို အလည်လာတဲ့ ယိုဒယားမလေး၊ MRT (မီးရထား) လမ်းပေါ်ကို ခုန်းဆင်းတဲ့ကိစ္စကို စင်္ကာပူ လမ်းနှင့် ပို့ ဆောင်ရေးဌါနက စင်္ကာပူငွေသုံးသောင်း ကျော်နဲ့ဖြေရှင်းပြီး လေယာဉ်ပေါ်ကိုယ် လိုက်ပို့ လိုက်တယ်။ ထိုင်း အစိုးရက လက်မခံပဲ သံရုံးကနေ စင်္ကာပူ အစိုးရနဲ့အခြေအတင် စေ့စပ်ဆွေးနွေးလိုက်တယ်။ ကောင်းမလေးက ခုမှ ၁၆၊ ၁၇ နှစ်လောက် ခြေနှစ်ချောင်း ကျိုးသွားတယ်။ သုံးသောင်းခွဲးသည် သူမရဲ့ကျန်ရှိတဲ့ ဘဝ တခုလုံး မဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ ကောင်မလေးနှင့် မိဘတွေက ငွေသုံးသောင်းကျော်နှင့် ကျေအေးနိုင်ပေမယ့် အစိုးရက သူ့ နိုင်ငံသားရဲ့ဆုံးရှုံးမူကို ဒီပိုက်ဆံလောက်နဲ့လက်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုလို့သိန်း ၂၀ လောက်လို့ ထင်တယ် (သေချာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ) ထပ်ပြီး လျှော်ကျေးပေးလိုက်ရတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံမှာ မဆို သူ့ နိုင်ငံသားတွေကို ကာကွယ်ပေးတာတွေ မြင်ရတော့ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကာကွယ်ဘို့ပျက်ကွက်တဲ့ ဘယ်သူ့ ကိုမဆို စက်ဆုတ်တဲ့ ခံစားမူနဲ့မုန်းခြင်မိတယ်။ သူများဆိုရင်တော့ ကံလို့သတ်မှတ်ပြီး၊ ကိုယ့်သား၊ ကိုယ့်သမီး ၊ ကိုယ့် အမျိုးမှ လုံးလ စိုက်တတ်တဲ့ လူတွေကို တွေ့ ရတော့ အံသြ စိတ်ပျက်မိတယ်။ မင်းကျင့်တရားလည်း မသိ၊ ကျောသား၊ ရင်သားခွဲခြားတဲ့ အစိုးရတွေ တွေ့ တော့ ဘုရားလောင်း မင်းဝေသန်သရာ မင်းလုတ်ရင်း ငရဲခံခဲ့ရတာ သတိယလို့ဆွံ့ အရောင်ဆောင်ခဲ့ရဘူးတာကို သတိရတယ်။ ဟီး ဟိ စိတ်ပျက်တာက အဲဒီ အလုတ်မှာ မကောင်းတဲ့၊ တရားမရှိ၊ အမျိုးမသိသူတွေနဲ့တွေ့လာခဲ့ရလို့ ၊ ထောင်နဲ့တူတဲ့၊ အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ အလုတ်ရှင်တွေ၊ လူတွေ ရှိနေလို့ ပါ။ သူတို့ ကို ကြည့်ပြီ တော့တောင် မန်နေဂျာ ဆိုတာ မတတ်ပဲနဲ့ဟောက်စားနေတဲ့ လူတွေလို့ထင်ခဲ့မိသွားတယ်။
အင်း ခုတော့ ဒီ အကျဉ်းထောင် အလုတ်ထဲက ထွက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ စလုံးမှာ ဘာလို့မြန်မာတွေ မြန်မာလို့အသိမခံခြင်တာလဲ။ ဒါပေမယ့် သူများလူမျိုးရဲ့မကောင်းတဲ့ အကျင့်ကိုယ် လက်ခံကျင့်နေပြီး၊ ကောင်းတဲ့ အကျင့်ကိုတော့ လက်မခံခြင်တာလဲ။ ကျမလေ မွန်းကျပ်တဲ့ အိမ်မက်ကို ထပ် မမက်ခြင်တော့ဘူး။ ကိုယ်ရဲ့ကောင်းတဲ့ အကျင့်ကိုယ် မထိန်းသိမ်းနိုင်တာ၊ မဟုတ်တာကို အထင်ကြီးတာလား၊ ခေတ်ရေစီး ဆိုတာလား။ ဟား ဟား ကိုယ့်လူမျိုးကို ရောင်းစားနေတာ တခြားနိုင်ငံသားလား၊ ကိုယ့်လူမျိုးလား။ လူတွေကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့တွဲးတွေ့လိုက် ရတော့ သမဝါယမ ခောတ်ကလို လူကြိုက်များတဲ့ ပစ္စည်းတခုကို၊ မကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတခုနဲ့မလိုခြင်ပဲ တွဲးယူခဲ့ရသလိုပဲ။
ဆိုလိုခြင်တာက ကိုယ်လူမျိုးကိုယ် ချစ်တတ်တဲ့ အသည်းနှလုံးဟာ၊ မနှစ်သက်တဲ့ မကောင်းတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ကူစက်ရောဂါတွေနှင့် ပူးတွဲးပြီး လူတကာ နှိမ်ချခံရတဲ့ အကြောင်းတရားတွေနှင့် ကောင်းခြင်း၊ မကောင်းခြင်းတွေနှင့် လူမျိုးတစုကို သမကုန်ပစ္စည်းလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ။
Posted by စော(အဝါရောငျမွေ) at 11:53 PM6comments:
Labels: ကျမ အကြောင်း
လျှောက်သွားဖြစ်တာတွေ ဖုန်းနဲ့ရိုက်ဖြစ်တာတွေ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ မြန်မာ နိုင်ငံကို စင်္ကာပူနိုင်ငံနဲ့တူတဲ့ နေရာမှာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းတာနဲ့ဥပဒေ အတိုင်းလိုက်နာတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ဥပဒေနှင့် ထိမ်းညို့ထားတာ မျိုးကလွဲးရင် ကျန်တာတော့ ဘာမှ မတူစေခြင်ပါဘူး။
မြန်မာတွေကို ကိုယ်ကျင့်သီလပြည့်စုံတဲ့ အမျိုးမြက်တဲ့ လူမျိုးဖြစ်စေခြင်တယ်။ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာ မဆို ကိုယ်ပိုင်ဟန်တွေ၊ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူး၊ စိတ်သန်းတွေနဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံကို အကောင်းဆုံး တည်ဆောက်ကြသလို မြန်မာတွေလဲ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ကျိုးစား ရပ်တည်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုဆိုတာ လေ့လာရမယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံတူကူးတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး ထင်တယ်လေ။ ကိုယ့်သိက္ခာတော့ ကိုယ်ထိန်းရမှာပေါ့။ သမိုင်းနှင့် အဆင်အလာ ရှိခဲ့တဲ့ လူမျိုးတွေပဲ။
မြန်မာဖြစ်ရတာ ရှက်နေ၊ ကြောက်နေတာထက် ကိုယ့်ကျင့်တရားပျက်မူ တွေကို ပြင်ပြီး၊ အမျိုးကိုယ် ဆောက်ရှောက်တတ်မူ့တွေကို မြင့်တင်လို့မြင့်မြက်တဲ့ လူမျိုးတွေ အဖြစ် ကမ္ဘာမှာ ရဲရဲ ရပ်တည်လိုက်စမ်းပါ။ မြန်မာဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူနိုင်ဘို့ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ်ကျ ပြုပြင်ကြမယ်ဆိုရင် သူများနိုင်ငံ က ဦးမော့ ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ တချိန်က နံပါတ်တစ် နေရာကို အချိန်မကြာ အမြန်ပြန်ရမှာပါ။ စိတ်ဓါတ်တော့ မြင့်တင်ဘို့လိုတယ်နော်။ ။
Posted by စော(အဝါရောငျမွေ) at 7:53 AM6comments:
Posted by စော(အဝါရောငျမွေ) at 10:30 PM 10 comments: